लिब्रेअफिससँग मारियाडबी | सँग राम्रो समर्थन र एकीकरण हुनेछ लिनक्सबाट
लिब्रे अफिससँग मारियाडबीसँग राम्रो समर्थन र एकीकरण हुनेछ
मारियाडीबी यो GPL लाइसेन्स गरिएको MySQL व्युत्पन्न डाटाबेस सर्भर हो। यसलाई माइकल "मोन्टी" विडेनियस (संस्थापक) द्वारा समर्थित छ MySQL) र नि: शुल्क सफ्टवेयर विकासकर्ताहरूको समुदाय। यसमा ईन्जिन भनिएको छ XtraDB, बदल्दै InnoDB। यसको MySQL सँग उच्च अनुकूलता छ किनकि यसमा समान कमाण्डहरू, इन्टरफेसहरू, एपीआईहरू र लाइब्रेरीहरू छन्, यसको उद्देश्य भनेको अर्को सर्वरको लागि एक सर्भरलाई सिधा परिवर्तन गर्न सक्षम हुनु हो।
खैर, मा प्रकाशित एक लेख मा कागजात फाउंडेशन ब्लग, तपाइँले महसुस प्रशंसाको स्तर पर्दाफास Monty द्वारा LibreOffice, जहाँ यसले अधिक वा कम निम्न व्यक्त गर्दछ:
«हामी परियोजना बारे धेरै उत्साहित छौं LibreOffice... परियोजनाको साथ हाम्रो भाग गर्न हामी एकीकृत गर्न र उत्कृष्ट समर्थन प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं मारियाडीबी LibreOffice मा। यसमा, अन्य चीजहरूको बीचमा, एउटा नयाँ समावेश छ LGPL C ड्राइवरहरू जडान गर्न मारियाडीबी o MySQL र MariaDB मा कुनै पनि मुद्दाहरूको लागि बग फिक्सहरू प्रदान गर्दछ जुन गम्भीर रूपमा असर गर्दछ LibreOffice«
तपाईं यसमा थप देख्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क। कुनै श doubt्का बिना, विश्वको लागि ठूलो समाचार खुला स्रोत y अफिस सुइट। सुधार लिबर अफिस आधार यो कोष्ठक संग?
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » लिब्रे अफिससँग मारियाडबीसँग राम्रो समर्थन र एकीकरण हुनेछ
ओरकलको आगमन र तिनीहरूबाट अलग हुनु, यो मेरो लागि अनौंठो लाग्दैन।
MySQL Oracle बाट पनि हो र यसको समुदाय संस्करणमा परिमार्जन हुन जारी छ, केही विस्तार जुन पहिले सामान्य थियो मेटाईयो र मलाई लाग्छ कि यो अर्को कारक हो।
मैले बुझिसकें कि उनीहरूले डाटाबेसहरूको लागि HSQLDB प्रयोग गरे, किनकि यो पूर्ण रूपमा जाभामा लेखिएको छ। उस्तै र तिनीहरूले केवल MySQL jdbc ड्राइभर परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।
त्यसोभए यदि Oracle प्रतिभा (MySQL को वर्तमान मालिकहरू) उनिहरूले ओपन अफिससँग गरे जस्तै सोच्न सोच्न भने, वैकल्पिक कार्यान्वयन हुनेछ।
समस्या के हो भने, के हुन्छ यदि Oracle लाई कानुनी खाका भेट्टाउँदछ कि यसले MySQL API लाई पेटन्ट गर्न अनुमति दिँदछ? केहि समय अघि यो भनिएको थियो कि ओरेकल प्रतिस्पर्धालाई रोक्न यस रणनीति अनुसरण गर्न खोज्दै छन्:
एपिआइलाई बुझ्नको लागि यो प्रकार्यहरू, भ्यारीएबलहरू, वर्गहरू, इत्यादिको नाम हुनेछ, केही अनौंठो तर ओरेकलबाट आउँदैछ ...
त्यो अवस्थामा मोन्टी कानुनी समस्याहरूबाट बच्न MariaDB एपीआई पुनः डिजाइन गर्न बाध्य हुनेछ, तर यो MySQL सँग मिल्दो बन्द हुनेछ।
के मन्टीको आफ्नो सृष्टिमा कुनै शक्ति छैन?
मिमी ... म पक्का छैन, मैले अधिक जानकारी खोज्नु पर्छ, तर मलाई लाग्छ कि यसले सूर्य माइक्रोसिस्टमलाई सबै अधिकारहरू प्रदान गर्‍यो जुन फलस्वरूप ओरेकलले खरीद गरेको थियो, त्यसकारण ओराकल नै ती हुन् जसलाई माईएसक्यूएलमा सबै अधिकार छ।
अझै, जबकि MariaDB को स्रोत कोड अझै स्वतन्त्र हुन्छ, यो प्याटेन्ट द्वारा संचालित हुनेछ, जसले वास्तवमा यसलाई स्वामित्व सफ्टवेयर बनाउँदछ।
अवश्य, जबसम्म Oracle स्रोत कोड को अंशहरू प्याटेन्ट गर्न व्यवस्थित गर्दछ पहिले वर्णन गरिए अनुसार। यदि तपाईं सक्नुहुन्न भने, त्यसो भए त्यहाँ MariaDB संग कुनै कानुनी समस्या हुनेछैन।
उहम र इजाजतपत्रको बारेमा के छ? वा उनीहरूले बिर्सछन् कि यससँग GNU GPL लाईसेन्स छ र तिनीहरू पेच परेको छ किनकि GNU GPL लाइसेन्स अनुसार:
GNU जनरल सार्वजनिक इजाजत पत्र वा यसको अंग्रेजी नाम GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस द्वारा राम्रोसँग चिनिन्छ वा अंग्रेजी GNU GPL बाट यसको एक्रोनिम भनेको १ 1989 XNUMX ((पहिलो संस्करण) मा फ्रि सफ्टवेयर फाउन्डेसन द्वारा बनाईएको इजाजतपत्र हो, र मुख्यतया उन्मुख हुन्छ सफ्टवेयरको निःशुल्क वितरण, परिमार्जन र प्रयोग। यसको उद्देश्य यो घोषणा गर्नु हो कि यस इजाजतपत्रले ढाकेको सफ्टवेयर नि: शुल्क सफ्टवेयर हो र यसलाई विनियोजन प्रयासहरूबाट जोगाउनु हो जुन ती स्वतन्त्रताहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूमा सीमित राख्छ।
मेरो मतलब, मलाई व्याख्या गर्नुहोस् यदि Oracle GNU GPL लाइसेन्स संग केहि सफ्टवेयर प्याटेन्ट गर्न चाहान्छ। नि: शुल्क सफ्टवेयर फाउन्डेशनले लाइसेन्सको उल्लंघन गरेको कारण मुद्दा हाल्न सक्छ।
Oracle कोडको मालिक हुनु र MySQL को अधिकारले यसको साथ चाहेको जे गर्न सक्दछ, इजाजतपत्र पनि बदल्छ र कोड बन्द गर्दछ र FSF ले पनि तिनीहरूलाई केही गर्न सक्दैन किनभने लेखकहरू उनीहरूको प्रोग्रामहरूको पूर्ण मालिक हुन्।
यो सत्य हो जबसम्म MySQL कुनै अन्य GPL वा कपिलिफ्ट लाइसेन्स सफ्टवेयरमा निर्भर हुँदैन।
तपाईं भविष्यका संस्करणहरूको इजाजतपत्र परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, तर के पहिले नै नि: शुल्क छ काँटा हुन सक्छ र GNU GPL लाइसेन्स संग जारी राख्न सक्नुहुन्छ। र धिक्कार छ कि तिनीहरूले कोड प्याटेन्ट, र मलाई लाग्छ कि ती डाटाबेस प्याटेन्ट पनि। यद्यपि तपाइँ सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ।
अर्को कुरा यो हो कि यदि तिनीहरूले MySQL लाई पेटेन्ट गर्न सफल भए पनि, मलाई लाग्दैन कि Oracle चलचित्रमा खराब मान्छे बन्न चाहन्छ, (ओपन अफिससँग अहिलेसम्म यो भन्दा खराब छ)।
ठ्याक्कै, Oracle ले MySQL लाईसेन्स परिवर्तन गर्न सक्दछ तर त्यसले अघिल्लो संस्करणलाई असर गर्दैन, केवल चीज जसले पछिल्ला संस्करणहरूलाई असर गर्न सक्छ प्याटेन्टहरू हुन्।
पेटेन्टको मुद्दा, सफ्टवेयरको लागि हो वा जे भए पनि यो जटिल छ र जहिले पनि टेक्नोलोजिकल ढिलाइ हुन्छ।
उबुन्टु सफ्टवेयर सेन्टर को पेपैल को लागी समर्थन छ
Xfce लाई केहि worksets मा मद्दत चाहिन्छ